★မြန်မာ့အလင်း★: ဒီမိုတွေက ကောက်ရိုးမီးသာဖြစ်တယ်
နိုင်ငံရေးလောကထဲရောက်တာ ၂ နှစ်ကျော်ပါပြီ။ ဒီမိုတွေဟာ လက်တွေ့ကျကျဘာမှ မလုပ်ကြပါဘူး။ မကြာခဏဆိုသလို စိတ်လှုပ်ရှားကြပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်တွေလိုပဲ စိတ်ကစားနေတာနဲ့ပဲ အချိန်ဖြုံးခဲ့ကြတာပါ။ ကောက်ရိုးမီးလိုပါပဲ.. ပြီးတော့လဲ ပြီးသွားတာပါပဲ။ စက်တင်ဘာအရေးအခင်း ဖြစ်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ပြီးတော့လဲ ပြီးသွားတာပဲ။ ဦးဝင်းတင် လွတ်လာတော့လဲ စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ပြီးတော့လဲ ပြီးသွားတာပဲ။ ဦးတင်ဦးလွတ်လာတော့လဲ စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ပြီးတော့လဲ ပြီးသွားတာပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာတော့ စိတ်လှုပ်ရှားပြန်ပြီ။ ပြီးတော့လဲ ပြီးသွားမှာပဲ။ သိပ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားရင် ဒီဗီဒီယိုလေး ကြည့်ကြပါ။
ပြည်ထောင်စုဆိုတာကြီးက ဘယ်ခွေးကောင်မှ ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ သည်ကမ္ဘာကြီးကိုလည်း ဘယ်ခွေးကောင်းမှ မပိုင်ဘူး။ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာတောင်မှားတယ် လွတ်လပ်ရေး တူတူမယူခဲ့ရင့် ခုကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ် အေးဆေးဖြစ်နေမယ် သဘောပေါက်။ ပင်လုံစာချုပ်အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို မဟာဗမာဝါဒီ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနဲ့ ဦးနု၊ ဗိုလ်နေဝင်း အုပ်စုက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီး မတရားလုပ်ကြလို့ မြန်မာ့ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ကွဲ ဖဆပလကွဲ အကုန်ကွဲတာ။ ရိုးသားမှုကို အခြေမခံတဲ့ အလိမ်အညာ ပြည်ထောင်စု ကြောင့် ဖြစ်ရတာ။ ပြည်ထောင်စု ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်း နားလည်အောင်ကြိုးစားဦး။
ရဲဘော် ၃ ကျိပ် မှာ ဗိုလ်နေဝင်းကို သပ်လျှိုထည့်ခဲ့တာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ လုပ်ကြံခံရပြီး အာဏာတက်ယူတာ ဦးနု။ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်ကျော် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်အောင် ခင်းစေခဲ့တာ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု။ တိုင်းရင်သားဒေသတွေ ဆင်းပြီး ဗမာလက်အောက်ခံ ညီညွတ်ရေး လိုက်လုပ်တာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း။
စအိုပေါက် မုဒိမ်းကျင့်ခံရတဲ့ စောက်ကျွန်ကုလား Free88
စောက်ကုလားရေ။ မင်းတို့ ကုလားတွေ တကယ်ကို အရှက်မရှိတဲ့ကောင်တွေပဲ။ မင်းက ဒီမိုဘက်တော်သား မဟုတ်လား? ဒါဆိုရင် . . နအဖ အဏာတည်မြဲရေးကို ကူညီနေတဲ့ ပလီဆရာတွေရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို အနောက်ဖက်ကနေ နှင်ထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်း ဘယ်တော့ စမှာလဲ.. ဖြေပေးပါ။ မင်းတို့ ကုလားတွေက.. ပြည်တွင်းမှာ ကျတော့ နအဖနဲ့ ပေါင်းပြီး ပလီဆောက်တယ်။ အခုဆိုရင် ပလီက ခွေးအူသံတွေ မနက်ပိုင်းဆိုရင် ဖွင့်ခွင့်ရကုန်ပြီလေ။ ပြည်ပမှာ ကျတော့ ဒီမိုတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်တယ်။ သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစားတဲ့ ခွေးလို စိတ်ဓါတ်မျိုးတွေ။
ဟေ့ကောင် ကုလား .. ငါတို့ မြန်မာလူမျိုး ဦးသန်းရွှေကို စောက်တင်းပြောယုံနဲ့တော့ ဒီမိုသမားလို့ လက်မခံနိုင်ဘူးကွ။ ကုလားအချင်းချင်းဘာမှ မလုပ်ပဲ မြန်မာလူမျိုးတွေကို အတင်းအဖျင်းပြောနေတာကတော့ လူလည်ကျတာပဲ။ ဒီတော့ နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို အနောက်ဖက် နှင်ထုတ်ပေးပါ။ အဏာရှင်ကို ပံ့ပိုးတဲ့ ကုလားတွေကို ဆန့်ကျင်ပြမှ ဒီမိုဘက်တော်သားလို့ မှတ်ယူလို့ရမှာပေါ့ကွာ။ မဟုတ်လားလေ? ဘယ်လိုလဲ… လက်တွေ့ကျကျ ဒီမိုသမား စစ်မှန်ကြောင်းပြသမလား? ဖြေပေးနော်။ ကုလားတွေ ဒီမိုငတုံးတွေကို လှည့်ဖျားလို့ ရတဲ့ခေတ်က ကုန်သွားပြီကွ။
ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ဝါဒ မြင့်မြတ်သည့် မြေမှာမရှိစေရ